रेशम सापकोटा र सिता श्रेष्ठको चेतना दिने गीत नेपालमा सार्बजनिक भयो : हेर्न छुटाउनु होलानी ? – Complete Nepali News Portal
रेशम सापकोटा र सिता श्रेष्ठको चेतना दिने गीत नेपालमा सार्बजनिक भयो : हेर्न छुटाउनु होलानी ?
August 18, 2017	390 Views
गीत समाज परिर्वतनको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका उत्ताउला र सुन्न पनि नसकिने गीतहरुको भिडमा सन्देश मुलक गीत लिएर आएका छन रेशम सापकोटा र सिता श्रेष्ठले । गीतले पुरै विषय बस्तु सन्देश मुलक र चेतना मुलक बनाएको छ । कुष्टरोग,अपाङ्गता भएका,स्वास्थ सेवामा छुट,फरक क्षमता भएका व्यक्ति प्रति सम्मान गरौं भन्ने जस्ता सामाजिक विषय बस्तु गीतले उठाएको छ । यसो त यस अगाडी पनि सापकोटाले धेरै सन्देशमुलक गीत सार्वजनिक गरिसकेका छन ।
यस्ता गीतहरु धेरैले नसुन्न सक्छन तर गीत जतिले सुन्छन ती सबैले गीतको प्रसंसा गर्दछन र सम्मान गर्दछन । रेशम सापकोटा र सिता श्रेष्ठकोआवाज रहेको सो गीतमा लय तथा शव्द सिर्जना रेशम सापकोटाले गरेका छन ।